Soo dejisan Protected Folder 1.2 – Vessoft
Programka sirta /
Soo dejisan Protected Folder
Folder Protected – aalad muhiim u ah ilaalinta sirta ah ee files ah. Software ka dhigayaa faylasha iyo fayl gebi ahaanba aan la arki karin, xaqiijinta ammaan ah u keydinta ganacsiga qarsoodi ah iyo macluumaad shakhsi ah, waraaqaha, sawirada iyo video. Folder Protected ka hortagtaa xatooyo xogta by furin, baxsiga xogta macluumaadka shakhsiga ah iyo qarsoodi. Software waxa uu leeyahay heerar dhowr ah ilaalinta iyo ka ilaaliya macluumaadka ka tirtirka shil iyo jeermiska fayraska. Folder Protected ayaa interface ah dareen iyo fududahay in la isticmaalo.
Ilaalinta fayl iyo files
Heerarka kala duwan ee ilaalinta
Ilaalinta Xogta laga furin
Simple iyo fududahay in la isticmaalo interface
Protected Folder Software la xiriira:
qalab The si ay u ilaaliyaan macluumaadka ka dhanka dibadda ah. software wuxuu hubinayaa ilaalinta xogta lagu kalsoonaan karo by isticmaalaya algorithms encryption awood badan.
Internet Programka sirta
Software si ay u helaan in ay internetka hor istaagay oo gab faafreebka internet-ka. Sidoo kale software awood u si ay u ilaaliyaan xisaab user iyo sirta ka dhanka ah jabsiga ah.
Software ee booqashada ku qarsoodi ah websites internet-ka. Software wuxuu taageeraa technology gaar ah oo sir ka kala iibsiga xogta iyo macluumaadka ka dhinac saddexaad.
software ah ee xidhiidhka la ilaaliyo iyo fadhiyada web ammaan ee internet-ka. Qarsoodiga ah ee wax hawlaha online waxaa lagu gaarayaa by isbedelka of the user ee IP-address.
Programka sirta Internet
Programka sirta Saxannada
Saxannada Programka sirta
Ku haboon qalab inay la shaqeeyaan DVD drives. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka boodo ilaalinta DVD iyo nuqul ka kooban yahay sida uu u qabtay faylasha ama image ISO.
Agabka in ay hubiso ilaalinta lagu kalsoonaan karo oo la xiriira internet-ka. Software ayaa awood u ah in la doorto server u jeclaystay khasaaraha yar ee xawaaraha internet-ka.
Software in la soo dejisan iyo faylasha geliyaan si ay adeeg file-qaybsiga. Sidoo kale codsiga awood u siineysaa inay si fudud u maareeyaan files of kaydinta daruurtii.
Easy in ay isticmaalaan matoor muhiimka ah ee router ee noocyada kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay decrypt sirta ah ee network Wi-Fi la isticmaalayo database hubaal ah loogu daydo qaar ka mid ah router.
Samsung Kies 3.2.16084.2 iyo 2.6.4.16113
Mozilla Firefox 55.0.3 iyo 57.0b3 rc 1